ကမာရွတ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်အင်အားစိစစ်ခြင်း ပါတီဝင်ကြေးကောက်ခံပြီးစီးမှု ညှိနှိုင်း – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကမာ ရွတ်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပါတီဝင်အင်အားစိစစ်ခြင်း၊ ပါတီ ဝင်ကြေးကောက်ခံခြင်း၊ ပါတီဝင် သစ်များစည်းရုံးခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကမာရွတ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကော်မတီရုံးတွင်ကျင်းပရာ ကမာ ရွတ်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးအောင်နှင့် မြို့နယ်ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်/စည်းအမှုဆောင်များ တက်ရောက်ကြပြီး တက်ရောက် လာသည့် မြို့နယ်ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်/စည်းအမှုဆောင်များမှ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို တင်ပြဆွေးနွေးကြကာ မြို့ နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌက ကျန်ရှိနေသည့် ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများကို ပြန် လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
← ၂၁ . ၅ . ၂၀၁၇ ရက်​​နေ့တွင်​ ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး(အ​နောက်​ပိုင်း) ပြည်​​ထောင်​စုကြံ့ခိုင်​​​ရေးနှင့်​ဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ အမျိုးသမီး​ရေးရာ ​တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားအား ပါတီဌာနချုပ်​ မှ အမျိုးသမီး​ရေးရာတာဝန်​ခံ ဗဟိုအတွင်း​ရေးမှူး ​ဒေါက်​တာ​ဒေါ်စန်းစန်းနွယ်​ ၊ ဗဟို​ကော်​မတီဝင်​ ​ဒေါ်ခင်​​ရွှေမြင့်​ တို့တက်​​ရောက်​​ဆွေး​နွေးခဲ့ကြပြီး ၄င်းအခမ်းအနားသို့ ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး ဒုတိယဥက္ကဌ ဦး​အောင်​ချိုဦး နှင့်​ တိုင်းပါတီ​ကော်​မတီဝင်​များ ၊ ခရိုင်​ ၊ မြို့နယ်​များမှ အမျိုးသမီး​ရေးရာတာဝန်​ခံများ ၊ ​ကောမတီဝင်​များ တက်​​ရောက်​ခဲ့ကြပါသည်​။ #Duwon
NCA မထိုးရသေးသော အဖွဲ့များ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် အတွင်း ပါဝင်လာရေး ကြိုးပမ်းရန် ကေအင်န်ယူ ဗဟို ကော်မတီဆုံးဖြတ် →
မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်နှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်များအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လုံခြုံရေးဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုယ်စား ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ပြည်နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစန်းရွှေ တက်ရောက်ဆွေးနွေး